Diyaaradaha isbaheysiga uu hogaaminaayo sacuudiga oo duqeymo ku dilay dad soomaali ah dalka yemen – STAR FM SOMALIA
Diyaaradaha isbaheysiga uu hogaaminaayo sacuudiga oo duqeymo ku dilay dad soomaali ah dalka yemen
Sida ay shaacisay Wakaalada Wararka Saba ee dalka Yemen laga leeyahay Duqeyn ka dhacday dalkaasi Yemen, ayaa waxaa ku geeriyooday dad Somali ah oo ku noolaa dalka Yemen.
Ilaa 12 ruux oo Somali ah ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen Duqeyn diyaaradaha Isbaheysiga Carbeed ay ku garaaceen Buundada Magaalada Sacda ee dalka Yemen.
Dadka geeriyooday 12 ruux oo ka mid ah waa Somali, halka ay jiraan dad Yemeniyiin ah oo dhaawacyo ay ka soo gaareyn duqeynta, halka qaar kalena ay ku dhinteen.
Dadkan Somalida ee ku geeriyooday duqeynta ka dhacday Magaalada Sacda ee dalka Yemen ayaa noqonayaa tiradii ugu dambeysay ee Somali ku geeriyoota duqeynta Isbaheysiga Carbeed ay ka wadaan dalka Yemen.
Inka badan 6-bilood diyaaradaha dagaalka ee Isbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo kala duwan ka geysanayay dalka Yemen, waxaana waxyeelada ugu badan ay ka soo gaartay dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi Yemen.
Dowlada Yemen ayaanan faah-faahin dheeraad ah ka bixin waxyeelada soo gaartay dadka Soomaalida, marka laga yimaado dadka ku dhintay duqeyntii ka dhacday xaafada Sacda ee dalka Yemen.
Somali badan ayaa weli ku sugan dalka Yemen oo ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya Xoogaga Xuutiyiinta iyo Dowladda Yemen oo garab ka helaysa Isbaheysiga Carbeed.
Al-Shabaab oo soo bandhigay Sarkaal ciidanka Militariga soomaaliya oo ay gacanta ku dhigeen(Daawo Sawirada)